के तपाईको कम्पनीमा कर्मचारी टिक्दैनन् ? पेप्सीले प्रयोग गरेको ‘लोकेशन फ्रि’ पोष्टले पो टिकाउँछ की ! | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर के तपाईको कम्पनीमा कर्मचारी टिक्दैनन् ? पेप्सीले प्रयोग गरेको ‘लोकेशन फ्रि’ पोष्टले पो टिकाउँछ की !
on: २६ भाद्र २०७५, मंगलवार १५:३८ मुख्य खबर, रोजगारी
भदौै २६, नयाँ दिल्ली (भारत) । कम्पनीमा कर्मचारीहरु लामो समयसम्म नटिक्ने, प्रतिभाशाली कर्मचारीलाई टिकाउनै गाह्रो हुने र भनेजस्तो कर्मचारी नपाउने समस्या अहिले जहिँतहिँ छ ।
चाहेजस्तो कर्मचारीहरुलाई टिकाउन कम्पनीहरुले अनेक उपाय अपनाइरहेका छन् । हल्का पेय उत्पादक कम्पनी पेप्सीकोले पनि यस्तै गरेको छ । कम्पनीले निश्चित सिटलाई ‘लोकेशन फ्रि’ अर्थात् जहाँबाट पनि काम गर्न मिल्ने बनाएको छ ।
एक पछि अर्को गर्दै विगत ६ महीनामा एक दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठदेखि मध्यम स्तरीय अधिकारीहरुको बहिर्गमनपछि कम्पनीले सो रणनीति अपनाएको हो । प्रतिभावान कर्मचारीलाई कम्पनीमै टिकाइराख्न र अन्य देशमा रहेका पेप्सीकोको एकाईमा उपलब्ध रोजगारी भारत बाहिर नगईकन गर्ने अवसर दिलाउन यस्तो उपाय अपनाइएको कम्पनीले बताएको छ ।
कम्पनीको गुडगाउस्थित मुख्य कार्यालयमा १० प्रतिशत पोजिशनलाई लोकेशन फ्रि गराईदैछ ।
यसको अर्थ हो ती पोष्टमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले देशभित्र जुनसुकै स्थानमा रहेर काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता कर्मचारीहरु भारतमा कम्पनीका फङ्शनल गु्रपको हिस्सा भएपनि तिनीहरुले दुबई, न्यूयोर्क वा अन्य मुख्यालयमा रहेको सेक्टर÷ग्लोबल हेडलाई रिपोर्ट गर्ने कम्पनीले बताएको छ । यस्ता पोष्टमा रहेर काम गर्ने अधिकारीहरुले भारतमा रहेका वरिष्ठ अधिकारीलाई रिपोर्ट गर्नु पर्दैन ।
प्रविधिबाट फाइदा लिन, प्रतिभालाई टिकाइराख्न र अर्को ठाउँमा नगइकन करियरलाई निरन्तरता दिन चाहनेका लागि यस्तो गरिएको कम्पनीका प्रवक्ताले बताएका छन् । ‘म्यानुफ्याक्चरिङ र विक्री लगायतका सिधैं ग्राहकको सामना गरिरहनु पर्ने कामका लागि भने यस्तो भूमिका दिईने छैन, तर मानव संशाधन, अनुसन्धान र विकास, सूचना प्रविधि र वित्त क्षेत्रका भूमिकाका लागि मात्रै हो,’ कम्पनी प्रवक्ताले भनेका छन् ।
गत महीना मात्रै मार्केटिङ हेड विपुल प्रकाशले कम्पनी छाडेका थिए । हालैका महीनामा स्न्याक्स पोर्टफोलियो मार्केटिङ निर्देशक वाणी दाण्डिया र रणनीति प्रमुख मिथुन सुन्दरलगायत कयौं अधिकारीले पनि पेप्सीको छाडेका थिए । एचआर विभागबाटै पनि करीब आधा दर्जन अधिकारी बाहिरिएका छन् । एजेन्सी